Zvinechekuita ne DHMI
Rumbidz o ingatipe sei rugare?
Rinda Tumakava Tudiki
Kugadzi Risa Kuvhuni Ka Kwemuk Ati
Ndinozviona semunhu akakomborerwa zvikuru nokuti kusvika zvino handina rimwe ramapfupa omuviri wangu rakambovhunika.
Muchirungu vanhu vehutano vanodaidza mhando yekuvhunika uku kuti furakicha (fracture). Ndingadai ndakasangana nedambudziko iri kakawanda ndichiri mwana mudiki nokuti ndaitamba mutambo weragibhi (Rugby), ndichirovera pane vamwe zvinesimba zvikuru. Asi ndinotenda Mwari kuti mapfupa angu ose ari mazana maviri nematanhatu akasimba uye achakabatana ose.
Jesu pachake haana kumbobvira avhunika rimwe ramapfupa ake, (Johane 19:33). Chiporofita chamambo Dhavidhi pamusoro pake chakazadzikiswa, “Anochengeta mapfupa ake ose; Hakuna nerimwe rawo rinovhuniwa” (Mapisarema 34:20).
Munyika ino mazuva ano, kana pfupa remutsipa, ruoko, gumbo kana zvikuru sei rehudyu rikange rakuvara, veutano vanoshandisa muchina we ekisireyi (X-ray) kutsvaka kana pane ravhunika.Pfupa ravhunika rikatadza kuonekwa kubudikidza nemuchina uyu zvinopa kuti rirege kurapwa nemazvo, zvinozokonzeresa mamwezve matambudziko munguva inotevera mukukura kwemunhu.
Asi handi mapfupa oga anovhunika muupenyu. Tinogona kuvhuna manzwiro edu kana hukama nevanhu vepedyo pedyo nesu hwasvika kumagumo. Chokwadi ndechekuti tikatanga kutsvaka zvakavhunika tinogona kuzviwana pose pose muupenyu hwemunhu. Muwananano, muzvikoro, kumabasa, kumakereke nekumwe kwese uko vanhu vanotsvaka runyarararo nekubatana, panogona kuwanikwazve muzvimbo idzi kukakavara nemakakatanwa, asina kugadziriswa pakati pevanhu. Chinonyanyokusiririsa pazviri izvi zvose ndechekuti vanhu vakawanda havakwanisi kuzviona.
Ndimo muzvinhu zvakavanzika izvi munobuda kutsamwa, kukakavara, kuvava nekuda kutsiva. Kuti tigadzirise zvinhu izvi mumwe nemumwe anofaninira kufarira kuva muyananisi. Jesu akadzidzisa kuti vayananisi vacharopafadzwa (kugoneswa kubudirira) sevana vaMwari, (Mateo 5:9). Asi vamwe vanozviti vayananisi, vanngotarisa zvishoma vakuvadzwa nematambudiko, vasingamirisani nematambudziko acho chaiwo. Iyi haihisiri sarudzo yakanaka yekupedza nayo matambudziko.
MuApostora Pauro akanamata minamato miviri mutsamba yake kukereke yeVaEfeso, ikanyorwa pasi kuti tibatsirike. Mune wekutanga anokumbira Mwari kuti “Meso ekunzwisisa kwedu azarurwe” (VaEfeso 1:18).
Kunze kwekunge meso edu emweya azarurwa, hatinga kwanisi kuona hudzamu hwehuipi huri muzvakavanzika zvedu zvinova zvivhunwa zvemweya, zvinova zvinotidzikisira nokuti rambidza kusvika pahuremu hwakanaka hunokudzika pamweya yedu kuti tizoramba tichirarama hupenyu hwekukunda nguva dzose.
Hurongwa hwaMwari kwatiri, kuva nehutano uye budiriro (3Johane2). Kuti tizonyatso kubudirira mukutakura basa rekumupupurira raakatipa. Mavhunwa akavanzika ari mumapfupa edu emweya anoti dzivisa kwazvo kuti tizadzikise chikamu chedu chatakapihwa kuti tose tizadzise pasi rose.
Ko izvo zvivhunwa zvinonyatsowanikwa papi chaipo?
Vatendi vazhinji kwazvo vano ziva zvakawanda kwazvo nezve zvinyorwa zvemu Bhaibheri, zvikuru kwazvo zviri mutsamba dzaPauro, Petro naJohane. Asi hazvitorori nguva ndefuzvakare kuziva kuti pane mutsauko mukurusa muupenyu hwemunhu sedungamunhu pazvinhu zvinotendwa nepfungwa badzi kana izvo zvinosanganiswa mumagariro ezuva nezuva.
Panekamusiyano kaduku duku kasina kunaka kanogona kuwanikwa sekutsemuka kunenge kwakaita bvupa rakavhunika. Aka kanowanikwa pakati pemagariro nekutenda kwemunhu. Kamutsetse aka kanonzi kavhunwa komweya.
MuApostora Pauro achinyorera tsamba kuVaKorose akazvitaridza sezvizvi “Naizvozvo, kana makamutswa pamwechete naKristu, tsvakai zviri kumusoro, uko kunaKristu,ugere kurudyi rwaMwari. Fungai zviri kumusoro, musafunga zviri pasi.Nokuti makafa, vupenyu bwedu, achivonekwa, nemi vo muchaonekwa pamwe chete naye pakubwinya,” (VaKorose 3:1-3).
Hupenyu hwedu husati hwaumbwa chimiro chahwo nemanzwiro edu uye nezvinhu zvisinei naMwari, zvakafanana nekusazvidzora, kuvava,kunyima, kutaura zvinyadzi nekureva nhema, taigara mumunhu wekare. Zvino takamubvisa sekubvisa kwatinoita nguwo yakasviba nekubvaruka yekare yatinofanira kubvisa tichikandira mumoto.
Zvino tava kushonga nguwo dzatakagadzirirwa naMwari pachake, dzinoti “kunzwira tsitsi, mwoyo munyoro,kuzvininipisa, kutsvaka rugare nehama, uye kuzvidzora”, (VaKorose 3:8-12).
Ukanyatsokuongorora upenyu hwako uchaona kuti pane zviratidzo zvinotevera zvinoti, minamato isingapidurwi, hupenyu hwechiKristu kwauri hwangova chijairira, uye Mwari akuita seasisa ratidze simba rake kunyangwe rekusunungura nekurapa kwauri. Zviratidzo izvi zviri pachena kukunongedzera kuti pane chivhunwa chemweya chakavanzika muupenyu hwako.
Mushonga wekudzosera hutano nekugadzirisa pakavhunika mumweya wako, kutendeuka mukuzvininipisa, ugadzirise hunhu nemafambiro ako sezvakanyorwa kuti “mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadanwa nako,” (VaEfeso 4:1).
Nekuda kweNyasha dzaMwari dzaanotipa nguva dzose, gadzirisa zvakakombama nekuvhunika zvemweya wako upodzwe nguva ichipo.